Mukuona bhuku raMemory Chirere rinonzi Tudikidiki zvakandipa mubvunzo wekuti tudikidiki chii? Zvakare izvi zvakandipa have yokuda kuziva chacho chinonzi tudikidiki.Mushure mekunge ndazoverenga bhuku iri, ndakazoona kuti tudikidiki twuri mubhuku iri twuri pakawanda. Chokutanga ndechekuti Tudikidiki ibhuku retunyaya tudiki. Chechipiri ndechekuti tunyaya turikutaurwa nevana vadiki. Chetatu ndechekuti tunyaya turi kutaura nezvezvinhu zvatisingawaniri nguva yokunyatsotarisa mazuva ose. Zvinhu zviya zvatinoti kana tikazviona hatina hanya nazvo asi izvo zviri izvo zvinoumba zvatiri. Izvo zvidikidiki izvozvi ndizvo zvine hanya nevana vari kutaura nyaya mubhuku raChirere, Tudikidiki.Zvinhu zvatinoti savakuru hazvina basa ndizvo zvinebasa kuvana varikutaura nezvazvo ava. Ingava nyaya here kuti munhu anyore nezvemwana ari kuba zvake nyama mumba mavabereki vake? Asi ukaverenga kanyaya kanonzi 'Mwana' kanova ndiko kanoparura bhuku iri unozoona kuti haisi nyaya yokutamba. Unotanga uchiita…
Ndakatora nguva yangu kuterera kuCD neDVD reDevine Touch apo vakomana ava vakaita basa guru rokuimba. Basa iri rakabva randiitazve kuti ndisangane nechirongwa chirikuitwa neZimbabwe Prisons, icho chiri kubuda pachivhitivhiti cheZTV. Mushure mokuona chirongwa ichi ndakabva ndafunga zviitiko zvakaitika muupenyu hwangu mugore ra2008 nera2010. Musi wa28 Chikumi 2008, ndakarohwa navarume vatatu vandisingazivi. Vakanditorera mari yekusiyabasa kwandainge ndaita apo kambani yedu yainge yaparara. Vakatorazve nhare yangu, bhutsu pamwe nembatya dzangu. Vakandirova chose ndokundisiya ndakarara pasi asi havana kundikuvadza zvokubuda ropa. Havana kubatwa varume ava. hwaiva husiku ini handina kuvaona kuti ndivanaani. Musi wa25 Chivabvu 2010, kumba kwangu kwakabiwa navamwe vanhu vandisingazivi kuti vaiva vanaani zvakare. Vakaba kusiya mumba musisina zvandainge ndashandira kwemakore anosvika makumi maviri. Vakandisiya ndaiita kunge mukomana arikubva kumusha achienda kudhorobha kundotsvaka basa. Vanh…
Musi weChishanu chikoro chePrimary chekuHopley chaicheredza zuva rokuverengwa kwamabhuku. Mukuru wechikoro cheHopley Primary vaEdwin Msipa vanoti,' Zuva iri nderekupa yeuchidzo izere zvikuru kuvadiki navakuru kuti bhuku ndiro musimboti wezivo yeranhasi namangwana.Donzo:Kusimudzira nokusimbaradza tsika yokurava zvinyorwa zvevamwe nezvavowo,kunyora ngano-nyaya nokudzirava pamwe nokunyora nhetembo,kudzirava nokutaiwo dzakanyorwa nevamwe.' Vakaenderera mberi vachiti, 'chirongwa ichi chichange chichiitwa kotoro yoga yoga pane shuviro yokusimbaradza ukama hwebhuku nemhuri sezvo chirongwa icchi chichikurudzira kuti mhuri dziite izvi kumba zuva roga roga.Vabereki vanokurudzirwa kuravira vana vavo mabhuku nekuvataurira ngano kwete kuti ndezvambuya, ticha kana kuti zvakapera nechinyakare.'
Pavanhu vainge vakakokwa musi uyu paiva neniwo Mutumwapavi ndakamirira sagano reGlobal Arts Trust. Mushure mokunge vana varatidza hunyanzvi hwavo pakudzana kwechinyakare uyewo kutamba mitam…
Visions of The Motherland: A Poetic Celebration of The Cultures, Tribes and People of Africaby Mensa Press USA (2010)
dzinza rako h…
The Zimbabwe Writers Association (ZWA) is the newest writers Organization whose formation started in July 2010 leading to the AGM of June 4, 2011. Zimbabwean writers have taken the initiative to coordinate themselves to form an organisation to represent th…
Muzvare Batsirai Chigama uyo anozivikanwa nokuita nduri dzinotekenyedza pfungwa dzavanhu ahange achisumuka muHarare akananga kuMozambique nomusi weMugovera 14 Chikunguru, 2012 kundovapo pachiitiko chemutambo wezvavadavadi unodaidzwa kuti Tambo Tambulani Tambo Art Camp and Festival unoitikira mumumhenderekedzo dzegungwa kuPemba dzinova idzo pachinzvimbo chetatu pakukura kwadzo muzendereka rose, nzvimbo inonzi iyo yakagona kukwezva vanhu vendudzi netsika dzakasiyanasiyana kubva mupasi rose kuzogara nokuumba tsika nokutambira kusiyana kwetsika namagariro avo. Muzvare Batsie sekuzivikanwa kwaanoitwa navatsigiri vake ainge ariko muchiitiko chemutambo uyu zvakare mugore radarika. Adzoka kubva kumutambo uyu veko vakaona zvakakodzera kuti iye adzokezve kundobatsirana navo kufambisa mutambo uyu zvakanaka zvinoita kuti vadavadi vose vachange vachizova nemukana wekuratidza hunyanzvi hwavo uku vabve vachifara. Mushure mekunge avapa mazano ekufambiswa kwemadopiro ehudavadi akaita sewawa, Ba…
Zaza anoti iye anofara zvikuru kuwana mukana wekundobatana navamwe vatambi vemitambo yekuyedzesera iyi kubva kunyika dzapasiyana muzendereka rose. 'Ndinovimba kuti ndichanosangana navamwe vadavadi kubva kune dzimwe nyika pasi rose, avo vachange vachibva kutsika namagariro akasiyana neangu. ndinovimba kuti kuchange kuchinakidza kwazvo pamwe nokudzidzisa uye…
Stephen Chifunyise aitaura izvi pachiitiko chekuratidzwa kwemutambo wake mutsva unonzi "Desperately in Love" muTheatre in the Park nemusi wa3July 2012. GMB yakabatana neveRooftop Promotions kuti mutambo…
Zvawariramwa nhasi kurifuratira ndakupa iro riya rawaisigezera risati rakwata zvaita sei? kuramwa rawaiti kana wodya nemeso anopinduka iro dikita richiva deuteu rwizi rwemuzhizha kunge wariwana woda kuziya zvaita sei? kuramwa randakupa nemwoyo unoda ndichiti waridya ugonazva neminwe zvako zviya meso uchiita kutsinzinyira kunge she vode kurigwa nehope padare zvaita sei? kundipa rushambwa rwakadai dai tange tinembwa pano kana zvake mukomana wekuseri kana idzo huku hadzo ndadzikandira dzarikachura, kuriomberera kana kurichohonya zvino zvapasina ndoripa ani?